Dambiile C/llahi Daahir oo hore u dilay dhibane Ciise Maxamuud oo maxkamada Galkacyo ay ku fulisay xukun qisaas ah. – Radio Daljir
Dambiile C/llahi Daahir oo hore u dilay dhibane Ciise Maxamuud oo maxkamada Galkacyo ay ku fulisay xukun qisaas ah.
Luulyo 11, 2010 12:00 b 0
Galkacyo, July 11 – Maxkamada magaalad aGalkacyo oo hore dil ugu xukuntay nin gacan ku dhiigle ah oo hore u gaystay fal dambiyeed dil ah ayaa maanta fulisay qisaas. Dambiile C/llai Daahir ayaa dilay dhibane Ciise Maxamuud Siciid …
Mudaaharaad ka dhashay ciyaar saaxiibtinimo oo dhex mari lahayd Dhahar & Xingalool oo ka dhacay Xingalool.
Guddidii talo-bixinta qaab-dhismeedka xukuumadda cusub ee Somaliland oo shaaca ka qaaday tirada Wasaaradaha.